Kedu ihe bụ ebumnuche valvụ nchekwa?
Akụrụngwa etinyere na Chemical ma ọ bụ Usoro ma ọ bụ mmanụ ala ma ọ bụ ụlọ ọrụ Petrochemical maka ịtụgharị akụrụngwa ka ọ bụrụ ngwaahịa bara uru na -abụkarị Fluidic na ọdịdị. Mmiri na -esi na paịpụ na -esi n'otu ngwa gaa na nke ọzọ, enwere ike ịhazi ya ka ọ dị ọkụ, mee ka ọ dị jụụ, kpochapụ ya, jupụta ya, gwakọta ya ...
Oghere Valve Knife Edge na -arụ ọrụ na ụdị
Valve Gate Gate Valve Definition: valvụ ihu mma ma ọ bụ valvụ ọnụ ụzọ dị mma bụ valvụ ọrụ dị arọ nke na -arụ ọrụ na oke mmiri viscous. Mgbe akwụkwọ akụkọ dị na ...
Ụdị valvụ nlele (Valve Non -Valve) NRV
Ụdị valvụ nlele (valvụ na-anaghị alọghachite):- enwere ọtụtụ ụdị valvụ nlele nwere nhazi ahụ dị iche iche. Ihe sochirinụ bụ ụfọdụ ụdị valvụ nlele. 1. Valve Swing Valve Na nlele valv ...
Ọrụ Block na Bleed Valve
Ụdị mgbochi na valvụ valvụ, ngọngọ na valvụ nke na -agbaji okpukpu abụọ na valvụ ọgbụgba, otu nkeji ngọngọ abụọ na valvụ ọgbụgba n'ime ụlọ ọrụ kemịkalụ, anyị kwesịrị ikewapụ ụfọdụ akụrụngwa ugboro ugboro maka nhicha ...
1. valvụ Globe: (Ụdị valvụ) valvụ Globe: Ọ na -arụ ọrụ site na imeghachi omume diski ma ọ bụ plọg. Diski ma ọ bụ plọg na -agagharị ma ọ bụ pụọ na oche si otú ahụ na -akwụsị nrugharị mmiri ma ọ bụ na -ekwe ka mmiri na -asọ. Ogwe diski ma ọ bụ plọg gafere ...
Urukurubụba urukurubụba urukurubụba (TOBV)
Valve butterfly valve (TOBV) na-ewepụta jiometrị atọ-offset iji mepụta akara afụ ọnụ. Ihe si na nke a pụta bụ valvụ na-emepụtacha ụzọ efu nke na-esetịpụ ihe nlele maka arụmọrụ ikewapụ iche, nke a na-emegharị ọzọ. Kemgbe iwebata ha ...
E nyefere ndị ahịa Trinidad na Tobago Valves Gate Valves
Nnukwu usoro nke valvụ bọọlụ enyere onye ahịa South Africa na Mee 20, 2021
2pc flanged bọl valves Atụmatụ Anti-Static Maka Ball- Stem- Isi Fụpụ-Gosiri na-egosi Stem Pressur ...